Outliers - အောင်မြင်မှုအတွက်ပုံပြင် Martech Zone
တနင်္လာနေ့, မေလ 4, 2009 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါသည်ငါ့စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ရသည်အဖြစ် မနေ့ကလေယာဉ်ပျံ, ငါမေ့သောအရာနှစ်ခု - ငါ့အားကစားဂျာကင်အင်္ကျီနှင့်ငါ့ထဲမှာစာအုပ်တွေထဲကတစ်ခုသတိရ ဖတ်ရှုဖို့ ပုံ။
ကံကောင်းတာက၊ ငါ့တံခါးဝနားမှာဆိုင်ကကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့စာအုပ်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုရှိခဲ့တယ် Outliers - အောင်မြင်မှုအတွက်ပုံပြင်က Malcolm Gladwellအဲဒီမှာရှိ၏ ငါက New Yorker ဆောင်းပါးတွေနဲ့သူ့စာအုပ်တွေမှာ Malcolm Gladwell ရဲ့ပရိသတ်ကြီးပါ။ On Gladwell, မြန်ကုမ္ပဏီ ရေးသားခဲ့သည်:
Gladwell ကဲ့သို့ကောင်းသောသို့မဟုတ်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသောစီးပွားရေးအတွေးအခေါ်ခေါင်းဆောင်၏အခန်းကဏ္ into သို့လတ်တလောမှတ်ဉာဏ်ထဲမှမည်သူမျှမပါ ၀ င်ခဲ့ပါ။ သူ၏ပထမဆုံးစာအုပ်ဖြစ်သည့် The Tipping Point - သေးငယ်သောအရာများသည်ကြီးမားသောခြားနားမှုကိုမည်သို့ပြုလုပ်နိုင်သည် (Little, Brown, 2000) သည်အမေရိက၏စွန်ပလွံများထဲသို့ကျသွားပြီးနောက် Gladwell သည် New Yorker ရှိအထွေထွေ ၀ န်ထမ်းစာရေးဆရာမှသည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနတ်ဘုရားအဖြစ်သို့ခုန်ချခဲ့သည်။
Outliers သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးမဟုတ်ပါ။ အကြောင်းပါ အောင်မြင်ခြင်း။ Malcolm Gladwell သည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသောပုံပြင်စာရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည်မအောင်မြင်သောထူးခြားသည့်အချို့သောပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်ရပ်များကိုအောင်မြင်သူများ၏သမိုင်းတွင်မျှဝေသည်။ ဤစာအုပ်သည်အခြေအနေများသည်အောင်မြင်မှုအတွက်အပြည့်အ ၀ တန်းစီထားခြင်း၊ ကံကောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောမေးခွန်းများနှင့်ခက်ခဲသောအလုပ်ကိုအထောက်အကူပြုသည့်အခြေအနေများအကြောင်းဖော်ပြသည် - အထူးသဖြင့် - နာရီပေါင်း ၁၀,၀၀၀ သည်လူအများစုကိုကျွမ်းကျင်မှုသို့ပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။
ထူးခြားတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေထဲကတချို့ ... အဘယ်ကြောင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဟော်ကီကစားသမားများသည်နှစ်၏ပထမလများတွင်အဘယ်ကြောင့်မွေးဖွားလာကြသနည်း။ အာရှသားတွေဟာသင်္ချာမှာဘာကြောင့်ကြီးတာလဲ။ IQ သည်အောင်မြင်မှုနှင့်မည်သို့ဆက်စပ်သနည်း။ အဘယ်ကြောင့်တောင်ပိုင်းသားများစစ်တိုက်ခြင်းငှါအမြန်ရှိပါသလဲ လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကိုရီးယားလေကြောင်းလိုင်းများပြိုကျရာတွင်လူမျိုးစုသည်ဤမျှကြီးမားသောအခန်းကဏ္ play မှမည်သို့ပါဝင်ခဲ့သနည်း။ ခေတ်သစ်ကျောင်းပညာရေးနည်းစနစ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများအောင်မြင်မှုအခွင့်အလမ်းများကိုမည်သို့ပြောင်းလဲစေသနည်း။
စာအုပ်၏ကိုယ်ကျင့်တရားသည်အလွန်ကောင်းသည်။ ငါတို့ နိုင် သူတို့နေထိုင်ရာ၊ အလုပ်နှင့်ကစားသည့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့်လူတို့၏အောင်မြင်မှုကိုသြဇာညောင်းသည်။ Gladwell သည်သူ၏မိသားစုကိုအကောင်းဆုံးဥပမာအဖြစ်ပေးသည်။ သူ၏မိသားစုဘ ၀ မှတစ် ဦး ချင်းအနေဖြင့်အနာဂတ်နှင့်အနာဂတ်နှင့် Gladwell ကိုယ်တိုင်၏အောင်မြင်မှုကိုပြောင်းလဲစေခဲ့သည့်စွန့်လွှတ်အနစ်နာခံမှုများကိုပြောဆိုခြင်း။
ယုတ္တိဗေဒနှင့်ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုစိန်ခေါ်သည့်စာအုပ်များကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်သည်။ ဤသည်ကျိန်းသေငါ့အကြိုက်ဆုံး Gladwell အပိုင်းအစဖြစ်ပါတယ်။ ငါဒီစာအုပ်ကိုဖြိုဖျက်လိုက်ပြီးအခုအိမ်ပြန်လမ်းမှာဖတ်ဖို့တစ်ခုခုရှာရတော့မယ်။
Tags: မီးပုံဆေးတောင့် CRMCatchwind SMS ကိုသုံးပါcms iphone အက်ပ်နိုင်ငံတကာရှာဖွေရေးiPhone app ကို
Acrylic Times သည်သတင်းစာများနှင့် RSS ကိုပေါင်းစပ်ထားခြင်း
မေလ 4, 2009 မှာ 5: 22 pm တွင်
သူသည်သင်၏စိတ်ဝင်စားမှုကိုထိန်းသိမ်းရန်လျှို့ဝှက်ချက်ကိုသင်ယူခဲ့သည် - ပုံပြင်ကောင်းတစ်ခုပြောပြပါ။ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မေလ 4, 2009 မှာ 7: 47 pm တွင်
ဒီဟာငါ့အကြိုက်ဆုံး Malcom Gladwell စာအုပ်တွေထဲကတစ်ခုပါ။ အလွန်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်း!
မေလ 5, 2009 မှာ 8: 50 AM
ငါအရမ်းအရမ်း Outlier ခံစားခဲ့သည်။ စာအုပ်၏အဓိကအချက်မှာ၎င်းသည်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတစ်ခုတည်းကိုသာအံ့သြလောက်အောင်အောင်မြင်စေရုံသာမက၎င်းသည်ညီမျှခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သင့်သည့်အခြေအနေများနှင့်အချိန်ကာလများကိုပေါင်းစည်းခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ငါသည်လည်းဂလက်ဝဲလုပ်ဆောင်နေသည့်အရာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သောဘုရားသခင်၏အချုပ်အခြာအာဏာကိုဥပမာများနှင့်ဤလောက၏အဖြစ်အပျက်များတွင်သူ၏မမြင်ရသောလက်သည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုမှတ်တမ်းတင်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုတွေးမိသည်။ ဘုရင်များနှင့်တိုင်းနိုင်ငံများကိုမည်သို့ဖြိုခွဲဖျက်ဆီးသည်ကိုသမ္မာကျမ်းစာကဖော်ပြသည်။ ဖြစ်ရပ်များ၏ဖြစ်စဉ်များကိုထိုအချက်အထိကျွန်ုပ်တို့သေချာပေါက်မမှတ်မိနိုင်ပါ။
မေလ 5, 2009 မှာ 11: 16 AM
wow - Curt! ဟုတ်တယ်၊ 'ငါတို့ကတာဝန်မရှိဘူး' ဆိုတာမေ့သွားတယ်။ လွတ်လပ်စွာလုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသော်လည်းဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ပတ် ၀ န်းကျင်ရှိသူများကိုနေ့တိုင်းကူညီရန်အခွင့်အလမ်းများပေးသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားသူများကိုအောင်မြင်မှုဆီသို့ ဦး တည်စေသောအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်သည်။ မေးခွန်းကကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အမှန်တကယ်အောင်မြင်အောင်ကူညီဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖွင့်မလားဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
မေလ 6, 2009 မှာ 8: 43 AM
မင်းငါ့သူငယ်ချင်းညာဘက်ပါ နောက်ဆုံးတွင်ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုချစ်သောကြောင့်သာမကကောင်းသောအကျင့်ကိုသူ့အားချီးမြှောက်။ ကျေးဇူးတင်သောကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းခံရသည်။
စိတ်ထဲပေါ်လာသည့်အခြားအရာတစ်ခုမှာကမ္ဘာကြီးအတိုင်းတိုင်းတာသည့်အတိုင်းအောင်မြင်သောဘဝသည်အမှန်တကယ်အောင်မြင်မည်မဟုတ်ပါ ဟူ၍ ဖြစ်သည်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ခရီးဆောင်အိတ်များနှင့်ကြားနာခြင်းမရှိပါ။ 🙂
မေလ 7, 2009 မှာ 12: 19 AM
ငါလည်းဤစာအုပ်ကိုနှစ်သက်သည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်တော့်သားကြီးသည်ဘောလုံးကစားခြင်းကြောင့်ကစားသမားတိုင်းတွင်အသက်အကြီးဆုံးကစားသမားတစ် ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည့်နေ့မှ ၁၅ ရက်အကြာတွင်ကစားသည်။
24:2009 pm တွင်သြဂုတ်လ 3, 53
ငါစာအုပ်၏အကျဉ်းချုပ်ကိုဖတ်ပါတယ်။ အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ် အဲဒါကိုကူးယူပြီးပြီ။ ဒါကိုမျှဝေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်